Phân loại vít, bu lông trong kho phân phối
kanagawa	(ဟခန်း)ဝန်ထမ်း 株式会社ヒト・コミュニケーションズ
အချိန်စား (၁နာရီ ဝင်ငွေ) 1,300
chưa có kinh nghiệm có thể ứng tuyển
làm dưới 28 tiếng/ tuần ok
lịch theo shifuto
Giờ làm A.7h～16h B.9h～18h C.10h～19h D.11h～20h（ nghỉ giải lao 75 phút・làm 7.75 tiếng/ tuần）
ဂိုဒေါင် ဝန်ထမ်း (အော်ဒါပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်)
အချိန်စား (၁နာရီ ဝင်ငွေ) 1,300	〜 1,625
တစ်ပတ်လျှင် ၂၈ နာရီအောက် အလုပ်ကန့်သတ်ချက်မရှိသူများ
ဆိုင်းစနစ် (break time 60 mins)၊
နေ့အဆိုင်း ・ ・ A. 9:00 မှ 18:00 B. 10:00 မှ 19:00 C. 11:00 မှ 20:00 D. 12:00 မှ 21:00 E.13:00 မှ 22:00
ညဆိုင်း ・・・ F.20:00-5:00 G.21:00-6:00 H.22:00-7:00
* သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်၊ နေ့ဆိုင်း ၊ ညဆိုင်း သီးသန့် ကဲ့သို့သော တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုများ ရှိပါက အင်တာဗျူးချိန် တွင် သင့်အား မေးမြန်းပါမည်။
飲食店正社員　（ホ一ル／キッチン／チ一フ／店長）　募集　( 池袋の新店　ォ一プニング　募集）
စာတိုက်ဆိုဒ်ဂိုဒေါင်တွင် အပေါ့စားအလုပ် [Night shift recruitment]
Shift System ( Break 1 hour)
F.20:00-5:00 G.21:00-6:00 H.22:00-7:00
* အလုပ်ချိန်ပြင်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုများရှိပါက အင်တာဗျူးသည့်အချိန်တွင် သင့်အား မေးမြန်းပါမည်။အပြောင်းအရွှေ့စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် လစဉ် ၈ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂိုဒေါင် ဝန်ထမ်း (Order မှာယူခြင်းနေရာတွင်တာဝန်ယူရပါမည်)
* သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်၊ နေ့ဆိုင်း ၊ ညဆိုင်း စသည်တို့ ကဲ့သို့သော တောင်းဆိုမှုများ ရှိပါက အင်တာဗျူးချိန် တွင် သင့်အား မေးမြန်းပါမည်။အပြောင်းအရွှေ့စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် လစဉ် ၈ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
1	2 ... 25